I-Central Studio e-Piromontas Slucko Strt.
Incane futhi ithokomele i-15 sq.m. Isitudiyo esisendaweni yamabhizinisi ekhulayo eseduze nendawo eyingqophamlando yedolobha-Gediminas Tower nezinyathelo nje kude neVilnius Old Town kanye nezindawo ezikhangayo zedolobha, izitolo eziningi, amasiko, ezobuciko nezindawo zokuzijabulisa. Kunamabhasi aqondile aya eSikhumulweni Sezindiza/Eziteshini Zebhasi Nezitimela.
Imizuzu eyi-15 uhamba ngezinyawo ukuya eCathedral sq
Imizuzu emi-5 ukuya eRiverside
Imizuzu eyi-10 uhamba ngezinyawo uye eGediminas Ave enkulu naseVincas Kudirka Sqoure
Imizuzu eyi-10 uhamba ngezinyawo uye ezitolo ezinkulu ze-PC Europa, i-VCUP
24/7 UZIPHEPHELE NGAPHAKATHI/
Le ndlu ye-3rd floor Vilnius Studio Apartment izinze esakhiweni esiyisitezi esingu-5 esakhiwe ngo-1981. Isitudiyo siphelele ngefenisha encane yokwenza ukuhlala kwakho kuntofontofo. Sicela uqaphele ukuthi ikhishi nombhede kusendaweni eyodwa.
I-Studio itholakala endaweni yebhizinisi ekhulayo yesimanje eduze kweGreen Bridge kanye nebhuloho laseMindaugas elihlukanisa isikhungo sedolobha kanye nesikhungo sedolobha Elisha. I-Šnipiškės (eyaziwa nangokuthi i-New City Centre) iyindawo e-Vilnius esosebeni olusenyakatho yomfula Neris, kuyindawo yesifunda sebhizinisi esisha sika-Vilnius namahhotela. Amabhilidi amaningi kanye nesikhungo sebhizinisi se-Europa Tower singafinyelelwa ngemizuzu embalwa uhamba ngezinyawo.
Ifulethi liphethwe umnikazi wefulethi. Ngenza konke okusemandleni ami ukukunikeza okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu ngokuhlala e-Vilnius. Ngiyayithanda idolobha laseVilnius futhi ngingakujabulela ukukunikeza lonke ulwazi oludingayo.